Mataanaha ku midoobay Dib u dhaca Muqdisho oo ka mideysan 9-qodob !! (Halkan ka Ogow). | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Mataanaha ku midoobay Dib u dhaca Muqdisho oo ka mideysan 9-qodob !!...
Mataanaha ku midoobay Dib u dhaca Muqdisho oo ka mideysan 9-qodob !! (Halkan ka Ogow).
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa u muuqaneysa mid marti galineysa xiisado siyaasadeed oo durbaanka ay u garaacayan Hoggaamiyayaasha maamul Goboleedyada Jubbaland Axmed Madoobe iyo Saciid Deni oo Puntland ah.
Colaadaha Siyaasadeed ee laga dhex abuurayo dhinacyada isku haya Siyaasada ee deriska ku ah magaalada Muqdisho, ayaa marka aad si fog u eegto u muuqaal eg mid lagu carqaladeynaayo xasiloonida ka jirta magaalada Muqdisho oo toddobadii sano ee u danbeysay kasoo kabaneysay dhaawacyadii kasoo gaaray burburka.
Xiisada siyaasadeed ee iminka ka taagan magaalada Muqdisho ayaa waxa majaraha u haya Axmed Madoobe iyo Saciid Deni oo deegaanada ay ka taliyaan u diidan colaada, waxa ayna dadku is weydiinayan sababta ay shacabka Muqdisho u dareemi la’ yihiin cida u diidan xasiloonida.
Marka laga soo tago siyaasadaha hoose ee leysku hayo, Xaqiiqdu waxa ay tahay in shaqsiyaadka lagu kala magacaabo Axmed Madoobe iyo Saciid Deni ay xasiloobida u diidan yihiin magaalada Muqdisho, taasoo ay cadeyn buuxda u tahay qodobada soo socda:-
1- Shuruudo is xigxiga oo u muuqda inay yihiin kuwo lagu suuragalinaayo colaado mar kale ay marti-galiso magaalada Muqdisho.
2-Ma dhicin in mar qura ay tanaasul u sameeyan Ummada Soomaaliyeed, maadaama cida la kulmeysa culeyska ugu badan ay iyagu yihiin.
3-Saciid Deni oo aan wali garan halka uu ka didsan yahay, balse u muuqda mid garabsiinaya Axmed Madoobe.
4-Heshiiska siyaasadeed ee Deni iyo Axmed Madoobe ayaa noqonaaya mid hadba lagu jaan-gooyo beer la xawsiga Saamileyda siyaasadeed, iyadoo marba lagu soo daro qodobo iyaga xiisa galiya.
5-Dhammaan doodaha iyo shuruudaha ay lasoo shartagan maaha kuwo lagu soo hadalqaado “Dhibaatooyinka heysta Shacabka”, waxaana xusid mudan in cabashooyinkooda ay yihiin keliya kuwo iyaga ugu jirta dano gaara.
6-Madhicin in Hoggaamiyayaasha mataanaha ah ay ka hadlaan arrimaha Badda.
7-Kama hadlan Horumarada ay gaaren ciidamada Qalabka sida, waxa ayna mar waliba muujiyan erayo dhaawaca ciidanka.
8-Waxa ay xoogga saran baahinta erayo dhaawaca shacabka Soomaaliyeed, sida Hanjabaado iyo in Soomaaliya ay dib ugu laaban doonto halkii laga keenay.
9-Waxaa xusid mudan inay yihiin kuwo ka dhextilmaaman madaxda kale ee Maamul Goboleedyada, taasoo ay kadhalatay isweydiin aan wali loo helin jawaab waafi ah.
Dadka ku xeel-dheer faaqidaada arrimaha siyaasada, waxa ay qabaan in caqabada hortaagan qabsoomida doorasho ka dhacda Soomaaliya ay tahay Jubbaland iyo Puntland, waxa ayna ku taliyeen in la ayido DFS oo diyaar u ah inay qabato Doorasho leysla ogolyahay.
Dhinacyada isku haya siyaasada Soomaaliya ayaa sidoo kale loogu baaqayaa inay fiiriyan maslaxada Ummada Soomaaliyeed, ka hor inta aysan fiirin danahooda gaarka ah.
Dhinaca kale, Shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaa la gudboon inay ilaashtaan Nabadda ka jirta magaaladooda, maadaama cida wajaheysa xasilooni darada ay noqon doonaan.
F.G Qormadan kam a turjumeyso aragtida Shabakada Badweyn, waxa ayna gaar u tahay qoraha ku saxiixan
W/Q. Anwar Bakhit
Previous articleCiidan ku cusub saaxada Siyaasada oo la tijaabinaayo oo galabta la wareegay amaanka Daljirka Dahsoon
Next articleMaxay yihiin Ciidamada uu cabsida ka muujiyay Madaxweyne Deni?
Madaxweynaha Puntland oo Shir ka furay Magaalada Garoowe+Ujeedka
DAAWO:Sida u Dhacay Qaraxii Maanta Ka Dhacay Magaalada Baladweyne & Khasaaraha Ka dhasahay
DAAWO MUUQAAL: Madaxweynaha Soomaaliland Oo Kulan Xasaasi Ah La Qaatay Wafdi Ka Socday UK
Saraakiil Katirsan Itoobiya oo Gaaray Kismaayo Iyo Shir-qarsoodi ah oo Kasocda Garoonka.
Dhageyso: Wararkii Ugu Dambeeyay Arimaha Xajka iyadoo Dowlada Somalia…
Xildhibaan goor dhow ku geeriyooday Isbitaal ku yaalla Turkiga oo uu ku xanuunsanaa